DEG DEG:Madaxweyne Farmaajo & Muuse Biixi oo kulan xasaasi ah wada qaadan doona Iyo Ethiopia oo…
February 11, 2020 Farah Abdikadir Mohamed 0
ADDIS ABABA(P-TIMES)- Iyadoo weli ay taagan tahay xurgufta siyaasadeed ee u dhaxaysa dowladda federaalka Soomaaliya iyo qaar kamid ah dowladd goboleedyada ka jira gudaha dalka isla markaasna magaalada Addis Ababa ee caasimada dalka Ethiopia ay kuwada sugan yihiin madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Somaliland ayaa waxaa socda qorshe heshiis ah oo ay hor boodayso dowladda Ethiopia.
Ra’iisal wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo ka duulaya istaraatiijiyada siyaasadeed ee u dhaxaysa labada dal ee Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa miiska wada hadalka ugu yeedhay hogaamiyaasha dowladda dhexe iyo maamulka Somaliland.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada Addis Ababa oo uu kaga qayb galay shirka Midowga Afrika ayaa la kulmi doona madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi xal looga gaadho siyaasada iyo xurgufta u dhaxaysa labada dhinac.
Abiy Ahmed oo xidhiidh dhow la leh labadan hogaamiye ayaa bartilmaameedkiisu uu yahay heshiisiinta hogaamiyaasha ku kala tagan siyaasada dalka, waxaana uu labada madaxweyne kala hadli doonaa arimo dhowr ah.
Muuse Biixi Cabdi ayaa casuumad uu ka helay Ra’iisa wasaaraha Ethiopia dartii u yimid magaalada Addis Ababa, waxaana uu la kulmi doonaa madaxweyne Farmaajo halka qorshaha Ethiopia uu yahay isku soo dhoweynta labada hogaamiye si looga gudbo caqabad kasta oo dib ugu dhigi karta geedi socodka siyaasadeed ee dalka Soomaaliya.
Somaliland ayaa aaminsan in ay ka go’day Soomaaliya inteeda kale, waxaana ay iskeed isku magacowday in ay tahay dowladd madax banaan oo aqoonsi raadis ah hasayeeshee sanadihii ugu dambeeyey ayaa waxaa xumaaday xidhiidhkii kala dhaxeeyey dowladda dhexe taas oo sababtay in Somaliland ay waydo dhaqaale badan oo ay heli jirtay halka dowladda dhexe ay cadaadis saartay dhamaanba dowladd goboleedyada diiday afkaarteeda siyaasadeed iyo mida maamul ee Soomaaliya.